Windows 8 တင်နည်းနှင့် partition ခွဲနည်း - Software Guide
Home / Computer အခြေခံပညာများ / Windows တင်နည်း / Windows 8 တင်နည်းနှင့် partition ခွဲနည်း
Windows 8 တင်နည်းနှင့် partition ခွဲနည်း Reviewed by Mr naing lin on 6:10:00 AM Rating: 5
Windows 8 တင်နည်းနှင့် partition ခွဲနည်း
Mr naing lin 6:10:00 AM Computer အခြေခံပညာများ , Windows တင်နည်း
windows တင်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုတယ်ဆိုတာတော့ အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး။ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ..။windows 8 DVD တချက် ဒါမှမဟုတ် windows8 သွင်းထားတဲ့ USB တခုခု ရှိရင် ရပါပြီ..။ ကွန်ပျူတာကို CDROM ထဲကို windows 8 DVD ထည့်ပြီး Restart ချလိုက်ပါ..။(usb နဲ့ဆိုရင်လည်း အတူတူပါပဲ)
ပြီရင် Boot ရွေးဖို့အတွက် ကီးတခုကို နှိပ်ထားပါ..။ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားအလိုက် ကီးကကွဲပြားပါတယ်..။hp မှာဆိုရင်တော့ F9 ၊Acer မှာတော့ F12 ၊အခြားအမျိုးအစားလိုက် ကွဲပြားပါတယ်..။ အောက်မှာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အသေးစိတ် တင်ပြထားပါတယ်..။
အခုလို boot option menu ပေါ်လာပြီဆိုရင် CD/DVD ROM Drive ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..။
ကြိုက်တဲ့ ကီးတခုကို တချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..ကျနော်ကတော့ enter ကိုနှိပ်ပါတယ်..။
windows8 ကို install လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ..။
language မှာ english ကို ရွေးပြီး Next ကို click လိုက်ပါ..။
install now ကို click လိုက်ပါ..။
accept the license terms မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Next ကို click လိုက်ပါ..။
ဒါက partition ခွဲဖို့ drive ကို fomat ချဖို့ အဆင့်ပါ..။drive option ကို ရွေးပြီး Next ကို click ပါ..။
partition ခွဲမယ်ဆိုရင် New ကို ရွေးပြီး Next ကို click ပါ..။
size မှာ ကိုလိုချင်သလောက်ကို ထည့်ပြီး Apply ရွေးပြီး Next ကို click ပါ..။
ok ပဲ လုပ်လိုက်ပါ..။
partition ခွဲထားတာ မြင်ရပါပြီ..။ ကိုယ် install လုပ်ချင်တဲ့ အပိုင်းကို ရွေးပြီး Next ကို click ပါ..။
အခုဆိုရင် windows8 ကို စတင် install လုပ်နေပါပြီ..။အနည်းငယ် ကြာပါတယ်..။
windows8 ကို installလုပ်တဲ့ အဆင့် ပြီးသွားပါပြီ..။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နောက်ခံအရောင်နဲ့ PC name ကို ထည့်ပြီး Next ကို click ပါ..။
ကျနော်ကတော့ No.don't turn ကိုရွေးပါတယ်..။
ဒီအဆင့်မှာလည်း Nextကိုပဲ ပေးလိုက်ပါ..။နောက်မှ setting တွေပြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်..။
ကိုယ့်ရဲ့ email. လိပ်စာထည့်ပြီး Next ပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါ..။
ကိုယ့်ရဲ့ email.နဲ့ password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ..။
နိုင်ငံ ရွေးပြီး ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရပါမယ်.ပြီးရင် email. ကိုထည့်ပြီ Next ကို click ပါ.။
windows 8 finalizing ဖြစ်ကြောင်းပြတာပါ..။
windows8 ကို မိတ်ဆက်ပြနေတာပါ..။
windows 8 မှာ ပါဝင်တဲ့ apps ကို installing လုပ်နေတာမို့ ခဏစောင့်ရပါမယ်..။
အခုဆိုရင် windows 8 ထည့်သွင်းခြင်း အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ..။
windows 8 ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..။
ကျနော်လည်း မအားတာနဲ့ ချမ်းငြိမ်း မှ ကူးယူထားပါသည်။။